Myanmar Gays Heaven: ကိုထက် ပါဗျ
သူငယ်ချင်းကူညီပါကွာm2boyman@gmail.com စစ်ကိုင်းက homo များအပ်ပေးပါ
Posted by Myanmar Gays Heaven at 9:14 AM
ကိုယ်​လည်းအတူတူပဲ စစ်​ကိုင်းနဲ့အနီးတဝိုက်​ရချင်​တယ်​ ရှယ်​ပြုစု​ပေးမယ့်​bot တ​ယောက်​လိုချင်​တယ်​ age 25မ​ကျော်​ရ။ဝတာမကြိုက်​ဘူး။လီး ၅လက်​မ​ကျော်​ရှိတယ်​လုံးပတ်​ ၁လက်​မ​ကျော်​စိတ်​ဝင်းစာပါက mail ထားခဲ့ပါ ချခြင်​တယ်​ ကျွန်​​တော်​လည်း ကိုထက်​ ပါပဲ အ​ပေါ်ကလူ​တော့မဟုတ်​ဘူးသူ့ထက်​​တော့လန်းတယ်​ဗျ ဟဲဟဲ
Anonymous June 3, 2014 at 9:06 AM
mail ma shi buu so yin kaw.. i from sg
Sagaing ks par ph0797973180
Anonymous June 3, 2014 at 9:10 AM
Anonymous August 25, 2014 at 5:06 AM
WE CHAT ID ထားခဲ့မယ်​​ဗျ ADD​ပေးပါ
ွှTun Tun April 2, 2018 at 8:49 AM
Anonymous June 3, 2014 at 5:41 PM
hmuehtet pyingkyaw June 8, 2014 at 4:17 PM
Mail ka pyaw kyi lay!
a sin.pyay yin sat shouk kya tr pop byar!
maung oo July 3, 2014 at 3:07 PM
I am top :-) ဆက်​သွယ်​ချင်​ရင်​ maungootum@gmail.com :-)
Itachi Yuki Nazaki January 24, 2017 at 7:52 AM
LEE SOCHI July 6, 2014 at 3:26 AM
Anonymous July 27, 2014 at 12:19 AM
Anonymous August 1, 2014 at 2:15 AM
Hello everyone.I am homo .I needaboyfriend.I am 19 year old.I am handsom& cute guy.call me 09402703663.I have viber..
Anonymous August 13, 2014 at 4:10 PM
တောင် ကြီး ကပါ။ thetpaing724@gmail.com
Ph no ?????
Anonymous August 30, 2014 at 8:44 AM
ပြည်ကပါအကို အသက်၁၆ပါအကို ၀၉၂၅၃၆၃၈၁၄၃
Anonymous November 2, 2014 at 1:56 AM
m2boylay@gmail.com March 9, 2015 at 1:39 AM
mandalay boy lover October 10, 2014 at 6:59 AM
Mdy က ဘယ်​သူရှိလဲ
Anonymous October 11, 2014 at 12:47 AM
Anonymous October 11, 2014 at 12:53 AM
Anonymous October 11, 2014 at 5:22 AM
ွှTun Tun April 2, 2018 at 8:54 AM
Anonymous October 11, 2014 at 5:30 AM
ွှTun Tun April 2, 2018 at 8:55 AM
Anonymous October 12, 2014 at 9:32 AM
I want to friend at ygn, mdy 094025565778
Anonymous October 21, 2014 at 2:35 AM
09425301542 top npt
Anonymous November 3, 2014 at 1:22 PM
Anonymous November 21, 2014 at 7:39 AM
Anonymous October 25, 2014 at 8:57 AM
Wechat ပဲသုံးလို့အဆင်​​ပြေလို့ပါ အ​နော့်​ဖုန်းက wechat. Id. ZMA1991995 ကို add ​ပေးကြပါ့လား စစ်​ကိုင်းကပါပဲ မန်း​လေးမှာ ​ကျောင်းတက်​တယ်​ နွဲ့ တာ​တွေ​တတော့ စိတိမ၀င်​စားဘူး သူတပြန်​ကိုတပြန်​ ပို​feelလာတယ်​
Anonymous November 7, 2014 at 1:45 AM
Anonymous November 8, 2014 at 12:01 AM
ထားဝယ်ကtop ver ရှိးလား
၃၅ ၄၀လည်းရတယ်အိမ်ထောင်ရှိလည်းရခန့်ပီးသန်နေရင်ရပီ top ver ရတယ်ထားဝယ်ကပါviber
Anonymous December 11, 2014 at 9:32 AM
09259817650 from Dawei top 25
adiba akter November 18, 2014 at 10:04 AM
Anonymous November 28, 2014 at 1:29 AM
ဖင်လိုးချင်တယ်မန္တလေးကပါခံချင်တဲ့သူph or mailထားခဲ့ပါအလကာလိုးပေးမယ်
young young March 12, 2015 at 5:32 AM
Anonymous December 5, 2014 at 5:23 PM
mdyကပဲ man to man စိတ်ဝင်စားရင် တခုခုဆက်သွယ်ဖို့ထားခဲ့ပါ တဘဝအတွက်နော် နွဲ့ရင်တော့ sorryပါ
Bu Xiang December 14, 2014 at 11:58 PM
ကျ​နော်​ WECHAT ID ထားခဲ့မယ်​​လေဗျ ADD​ပေးပါ PHX2889614121 မန်း​လေးကပါပဲဗျ နွဲ့လည်းမနွဲ့ဘူးဗျ တဘ၀စာဆိုတာကို စိတ်​၀င်​စားလို့ပါ
Anonymous December 17, 2014 at 7:31 AM
Anonymous January 28, 2015 at 1:26 PM
ပျောက်သွားလို့ပါ ၀၉၇၉၆၉၈၀၅၁၁ ကိုဆက်ပါ
Anonymous December 17, 2014 at 5:58 PM
Anonymous December 18, 2014 at 2:00 AM
စစ်ကိုင်းကပါခံချင်ပါတယ် top manly အလိုရှိသည်တည်းခိုခန်းခခံပါမယ် ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့ပါ
Anonymous December 29, 2014 at 6:55 PM
m2boylay@gmail.com March 9, 2015 at 1:42 AM
thuyamin December 30, 2014 at 4:59 PM
ဆက်သွယ်ပါဗျာကျွန်တော်ကမော်လမျြုင်ကပါ အရမ်းဖြစ်ချင်တယ် ၀၉၄၀၁၆၀၃၃၃၆ နော် wechatကthuyamin012ဆက်သွယ်ပါဗျအခုရန်ကုန်မှာ
Anonymous July 19, 2015 at 10:18 PM
top လား botလား
thuyamin December 30, 2014 at 5:00 PM
Anonymous January 1, 2015 at 5:58 PM
လိုးချင်တယ် ဖုန်းပေး ကျားစစ်စစ်မှနော်
Bo Bo April 5, 2015 at 2:05 AM
Ygn က Bot ပါ။နေရာအဆင်ပြေတယ်။0931050230 ကို viver နဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ညပိုင်းမဆက်သွယ်ပါနဲ့။
Bo Bo April 5, 2015 at 2:07 AM
Ygn က Bot ပါ။ နေရာအဆင်ပြေတယ်။ 0931050230 ကို Viver ကနေဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ညပိုင်းမဆက်ပါနဲ့။
Anonymous April 7, 2015 at 6:48 PM
friတစ်ယောက်အတည်တွဲချင်ပါတယ် ဖုန်း နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်ရင်ပြောပါ ။
Anonymous April 7, 2015 at 6:51 PM
09794648722ကို ဖုန်းဆက်နော် fri ဖြစ်ချင်ရင်ပါ အတည်တွဲ မည့် fri ပေါ့
သင်္ကြန်​တွင်းတူတူ ကဲဖို့ topတ​ယောက်​အလိုရှိသည်​...ရန်​ကုန်​မြို့တွင်းသာ...09250049945
Anonymous April 10, 2015 at 4:18 PM
နေသည် လိုးပေးရင်ဖင်စိတ်ကြိုက်ခံပေးမည် နေရာရှိသည် တယောက်ထဲအိမ်မှာရှိတယ် မနွဲ့ပါ
ဖင်ခံမဲ့များပြောကြပါ။လီးက တုတ်၊ ရှည် ၊ ဒစ်ပြဲ၊ ညိုနေပြီး အညာသားလီးပါ။ စိတ်တိုင်းမကျမချင်း လိုးပေးပါမည်။ကြာကြာစိမ်လိုးပေးပါမယ် ။
saiyin gyeit April 13, 2015 at 10:25 AM
မြစ် ကြီး နား ကို လာ နိုင် မ လာ ခံ ပေး မည် လမ်း စ ရိတ် ပေး မည် ချော် ရ မည်
Anonymous April 18, 2015 at 4:16 PM
saiyin gyeit April 19, 2015 at 8:54 AM
e mail ထဲ ကို ပို့ ခဲ လေ ph ကို
Anonymous April 20, 2015 at 5:44 AM
09425301542 Top Nay Pyi Taw
Anonymous April 21, 2015 at 11:10 PM
အချစ်စစ်ကို လိုသော အကို တစ်ယောက်လိုချင်ပါတယ်
viber 09797508802 want top
Bo Bo May 10, 2015 at 4:26 PM
Zin Kowin May 25, 2015 at 10:58 PM
Anonymous June 6, 2015 at 9:06 AM
စစ်​ကိုင်းက ပါကင်​ နဲ့ ဆက်​သွယ်​ချင်​ပါတယ်​
အပြန်​လှန်​ ပါကင်​​ဖောက်​ချင်​တယ်​ wechat id or gmail ထားခဲ့​ပေးပါ
Anonymous June 11, 2015 at 5:13 AM
Group sex လုပ်မည်
လူစုမယ် ငါးယောက်ပြည့်ရင် လုပ်မယ်
စိတ်ဝင်စားသော သူငယ်ချင်းများ 09797799095 သို့ ဖုန်းဆက်ပါ
Naing Tun June 23, 2015 at 10:42 PM
Anonymous June 30, 2015 at 5:11 PM
အရှည်6လက်မ လုံးပတ်က 5.5 လက်မ
ဖြူဖြူချောချော manly တစ်ယောက်လောက်နဲ့ sex လုပ်ချင်တယ်ဗျာ
Viber မသုံးလို့ ph ပဲ ဆက်ပါ
gipsy bird July 3, 2015 at 5:24 AM
datha kyawaung July 9, 2015 at 7:29 AM
nyiko July 16, 2015 at 3:42 AM
Anonymous July 19, 2015 at 9:31 PM
bot onlyပါ မလမကပါ အသက်25အထက်topနဲ့sexဖြစ်ချင်ပါတယ် viber မှာဆက်သွယ်ပေးပါ 09789016548 အသက်၂၈ မနွဲ့ပါ တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ်သာဖြစ်ချင်ပါတယ်
kyalsin moe July 30, 2016 at 12:11 AM
Bo Bo July 29, 2015 at 4:26 PM
အသက် 29နှစ် role က bot ပါ ။တစ်ခါမှမခံဘူးးပါဘူး။
Anonymous September 3, 2015 at 12:35 PM
လိုးပေးပါမည် ညင်ညင်သာသာပါ မှုတ်ပေးမှာလား
blackcoffee September 4, 2015 at 4:12 AM
blackcoffee September 4, 2015 at 4:13 AM
minoo yein September 25, 2015 at 1:16 AM
born in amarica
penis is very big.much long.
datha kyawaung October 7, 2015 at 9:09 AM
nyiko November 4, 2015 at 11:43 PM
ဖင်ခံခြင်လို့ပါ 09 254154512
nyiko November 4, 2015 at 11:47 PM
09 254154512 ကိုဆက်ပါ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရမည်
Anonymous November 7, 2015 at 9:04 AM
လီးစုပ်​ လီးရည်​​သောက်​ချင်​တယ်​ ကိုယ့်​ဟာကိုပြန်​​သောက်​ရတာ ငြီး​ငွေ့လာပီ အသက်​ ၃၅ ​ကျော်​ ကျားစစ်​စ်​ ပြဲလန်​ ကြီးမားတဲ့ လီးစုပ်​ပီး သုက်​ထွက်​တာ​စောင့်​စားချင်​တယ်​ ဆက်​သွယ်​ပါ ကျားစစ်​စစ်​ပါ
Anonymous November 25, 2015 at 7:53 AM
I want to meet you to be sucked.
SHINE Bobo November 25, 2015 at 8:03 AM
SHINE Bobo November 25, 2015 at 8:11 AM
Mon Mon December 1, 2015 at 10:06 PM
monsitmon@gmail.com bot,but manly.
ကိုဖိုးတုတ် May 19, 2016 at 12:24 PM
kyalsin moe July 30, 2016 at 12:09 AM
အကိုလည်း ဖင်တစ်ခါမှ မလိုးဘုးလို့ လိုးကြည့်ချင်တယ်ကွာာာ ဗိုက်ဘာ မရှိဘုးးး အီးမေး(ခ) fb ဖုန်းတစ်ခုခုရေးပေးခဲ့
kyalsin moe October 27, 2016 at 8:30 AM
Aung Paing Nyein August 16, 2016 at 6:25 AM
WELCOME VIBER 09791648422
Anonymous January 23, 2017 at 10:20 PM
ဖင်လိုးဖင်ခံ homo များ ဆက်သွယ်ပါ။ sexfeeling69@gmail
To My Friends.......